राजयोग अर्थात अरबपती हुने मानिसको हस्तरेखा यस्तो हुन्छ! तपाईको कस्तो छ? हेर्नुहोस्… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > राजयोग अर्थात अरबपती हुने मानिसको हस्तरेखा यस्तो हुन्छ! तपाईको कस्तो छ? हेर्नुहोस्…
admin December 20, 2020 December 20, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
एजेनसी । हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार हत्केलामा बनेका रेखाका सहायताले कुनै पनि ब्यक्तिको भविष्य र उसको स्वभावका बारेमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार हत्केलामा राम्रो र खराब दुबै प्रकारको रेखा बनेको हुने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार हत्केलामा बनेका शुभ निशानले ब्यक्तिको जीवनमा राजसुख प्राप्त गर्ने संकेत गर्दछ । राजयोगका अर्थ मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजदूत लगायतका पदको प्राप्ती हुन सक्छ ।
हत्केलामा हलो र तलवारको निशान भए यस्ता ब्यक्तिलाई शुभ र राजयोगका समान फल प्राप्त हुने विश्वास गरीन्छ । जुन ब्यक्तिको हत्केलामा यस्ता निशान हुन्छन् उनीहरुले प्रसस्त धन सम्पती प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ । हत्केलामा मंगल पर्वत अग्लो भइ, मष्तिक रेखा दुई भागमा बाडिएको भए र कान्छि औला लामो भएमा यसले राजयोग सहित सरकारी क्षेत्रमा उच्च पद प्राप्त गर्ने संकेत गर्दछ ।
होटलमा यस्तो अवस्थामा भेटिए सरकारी कर्मचारी, छापा हान्दा जे देखियो ! हेर्नुस्